SHIRKADA TELESOM WAA CADAWGA SHACABKA OODWEYNE. | Saxil News Network
SHIRKADA TELESOM WAA CADAWGA SHACABKA OODWEYNE.
May 31, 2015 - Written by muuse xaasi
Shirkadda telesom waxa loo aqoonsaday in aytahay cadowga shacabka oodweyne , shirkadan oo ah mid ku caan baxday in ay dhiig miirato bulshada reer oodweyne iyado aanmay jirin wax tix galin ah oo ay siiso bulshada ay ka ganacsato .
deegaanka gobolka oodweyne waxa kunool dad ka badan 90kun oo qof oo u af duuban shirkadan dhiig miirata ah .
oo isticmaala kaadkeeda iyadoo hadana caadeay in 1 doolar ee prapai-ka ahi uu u dhigmo 10 cent oo kaliya xaga 90CENT ee kale ay yihiin faalso qoraal ahaan u qoran waayo 1$ ee telesom waxa lagu hadlaa wax ka yar 25 daqiiqo xaga shirkadaha kale sida SOMTEL lagaga hadlo in ka badan 200 minit.
iyadoo arintaasi jirto ayaa hadana shirkadani dadka ay shaqaalaneyso ayaaan ahay dadk u nool magaalada oodweyne ee waa dad laga soo qaato magalooyinka haregeysa iyo burco iyadoo aan loo eeegayn aqoon iyo khibrad laakiin loo eegaagaayo gadh iyo gondi gaabsi , taasi waxay inoo cadeynaysa araghti gaabnaanta masuuliyinta shirkadan dhiig miiratada ah ,waayo shirkadani ma ogola in ay habayaraate ay wax manfac ah kusoo celisa bulshada iyo deegaanka oodweyne .
imika waxa ay ka shaqaynaysay gobolka daadmadheedh mudo ah 10 sanno wax ku ay soo celiso daaayoo bulshada ee waxay awoodi waayeen in ay gaydh ay iskaga xi\_dhaabn xabaalaha qadiimiga ah oo u jira wax ka yar 10 mitir .
shirkada telesom dhibaatada ay bulshada oodweyne ay u keentay waxa ka mida ah tawaarka ay ka dhex taagtay magaalada gudaheeda kaas oo sababay oo keenay xanuuno bada ini uu soo qabto bulshada .
hadaba shirkadan ayaa mid quudata dhiiga bulshada oo aan habayaratee ku soo celin bulshada wax arin iyo mahad naq ah .
xaga shirkada SOMTEL ee dhigeed ahi ay u dhistay cusbitaalkaa guud ee oodweyne uguna deeqday ambalaas cusub .waanan ugu mahadnaqaynaa arintaa qiimaha leh .
hadaba waxa ka dhici doona dhamaan dadka iyo degmooyinka uu xukumo daadmadheedh mudaharaad lagaga soo hor jeedo shirkada TELESOM laguna soo dhaweyn doono shirkada SOMTEL
W/Q: ZAYED MOHAMED OMAR